Tsena Ambalavao Isotry Tongo-by halatra maro nogiazana
Tratra teny amin`ireo biraokatera ireny eny amin` ny tsenan` Ambalavao Isotry ireo tongo-by be dia be nisy nangalatra tamina toerana maro teto an-drenivohitra izay tratra namidy an-tsokotsoko.
Marihana fa fananam-panjakana ireo tadim-by sy tngom-by ireo rehefa nasiana sainam-pirenena andro vitsivitsy lasa izay. Taorian` ny fanadihadiana nataon` ny teo anivon` ny Kaominina Antananarivo Renivohitra dia fantatra tsy nanana taratasy fanamarihana ny mpivarotra izay nahatrarana ireo entana halatra. Nanambara moa ny teo anivon` ny CUA fa atsangana ny delege manarina ireo entana amidy eny an-tsena. Vokatry ny fiaraha-mientana teo amin`ny CUA, mpitandro filaminana, mpivarotra ary olon-tsotra no nahafahana nahazo izao vokatra izao.